एमालेको टालोमा अट्ला त माओवादी हिङ ? - SINDHULI SAUGAT
SINDHULI SAUGAT ARTICLES NEWS UPDATE SPECIAL एमालेको टालोमा अट्ला त माओवादी हिङ ?
एमालेको टालोमा अट्ला त माओवादी हिङ ?
सिन्धुली सौगात डटकम प्रकाशित समय 9:23 PM
– कुसुम भट्टराई
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा काठमाडौंको गोंगबुमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एमाले भनेको कम्युनिष्टको हिङ बाँधेको टालो मात्र हो । माओवादी भनेको असली हिङ हो । अब हिङ नै भइसकेपछि हिङ बाँधेको टालोेको के काम ?’
यतिबेला हिङ अर्थात् माओवादीलाई पनि हिङ बाँधेको टालोको खाँचो परेको छ । एमालेको टालोमा माओवादीको हिङ राख्ने सहमति भएको छ । अनि त्यही हिङको पोको बोकेर चुनावमा जाने सहमति पनि भएको छ ।
एमालेको टालोमा माओवादीको हिङ अट्ला ? यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । यतिबेला चाहिँ वैचारीक र सैद्धान्तिक भिन्नताकै बीच ‘वाम एकता’का नाममा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिले चुनावी तालमेलसँगै एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी गठनका पक्षमा उभिएका छन् । ‘बृहत वाम एकता’ शब्दले कतिपय कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्तामा उत्साहको लहर पनि सिर्जना गरिरहेको छ ।
वाम एकता शब्द पञ्चायतकालदेखि नै कम्युनिष्टहरुबीच प्रिय रहँदै आएको छ । तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनदेखि वामपन्थीहरुबीच फुट र विभाजन नै हुँदै आयो । नेपालमा कम्युनिष्टहरु नै हुन्, जसले अलग–अलग रुपमा कार्ल मार्क्सको श्राद्ध गर्दै आए । ‘जड्याहालाई मदिरा खान र कम्युनिष्ट नेतालाई पार्टी फुटाउन कुनै बहानाको अभाव हुँदैन’ भन्ने उक्ति लामो समयदेखि चरितार्थ हुँदै आयो । एउटै कम्युनिष्ट पार्टी भने नेपालमा कहिल्यै बन्न सकेन ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा माओवादी केन्द्रले एकाएक सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई उपेक्षा गर्दै विपक्षी एमालेसँग चोंचोमोचो मिलाउन थालेपछि अचानक मनसुन सकिँदै गर्दा ‘वाम एकता’को कोलाहल सुरु भएको हो । यसमा माओवादीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति बनाएका बाबुराम भट्टराई पनि थपिएका छन् । चुनावलगत्तै एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्ने उद्घोष नेताहरुले गरेका छन् ।
के प्रचण्ड, केपी ओली र बाबुरामको यो ‘सरप्राइज एक्सन’ सफल र सहज होला ? चुनावी तालमेलसम्म यी दलहरुबीच मिलाप हुन सके पनि पार्टी एकीकरण भने त्यति सहज छैन । अतः तीनवटै पार्टीका कार्यकर्ता र जनतामाझ ६०/४० प्रतिशतको भागबण्डामा आधारित चुनावी तालमेलको औचित्य स्पष्ट गर्ने बहानाका रुपमा ‘एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी’को हौवा खडा गरिएको हुनसक्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ ।
साँच्चै पार्टी एकीकरण गर्ने नै हो भने केही गाँठाहरु फुकाउनैपर्ने देखिन्छ ।
पहिलो गाँठोः जबज
एमालेले मदन भण्डारीलाई आफ्नो आदर्श नेता मान्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि एकीकृत पार्टीले मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई अंगीकार गर्ने कि नगर्ने ?
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि एमालेभन्दा आफूहरु भिन्न भएको देखाउन माओवादीले ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’को नीति अघि सारेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथ एक पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्रकारहरुले सोधेका थिए, ‘एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद एउटै हैन र ?’
‘जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद एउटै हो भन्नु हात्ती र हात्ती छाप चप्पल उस्तै उस्तै हो नानु भनेजस्तै हो’, प्रचण्डको जवाफ थियो ।
प्रचण्डले त्योबेला एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले ‘सामन्तवादसँग संघर्ष गर्ने’ र एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादले ‘समान्तवादसँग समर्पण र सम्झौता गर्ने’ बताएका थिए ।
पार्टी एकीकरणपछि प्रचण्डले ‘हात्ती छाप चप्पल’ अर्थात जबजलाई स्वीकार्लान् त ? के प्रचण्ड र उनको पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताले मदन भण्डारीलाई आदर्श नेता मान्लान् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो छैन ।
यदि ‘जबज’ र ‘एशज’ (एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद)लाई मिलाएर बीचको नीति खोज्ने हो भने मदन भण्डारीको मौलिक जबज बिटुलो हुन जान्छ । एमालेका आमनेता र कार्यकर्ताका दृष्टिमा त्यो मदनको मौलिक जबजको अपव्याख्या र अति परिमार्जन हुनजान्छ ।
दोस्रो गाँठोः जनयुद्ध
अहिलेको एमाले खासमा झापा विद्रोहको जगमा खडा भएको हो । ०२८ सालमा कम्युनिष्टहरुको पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटिअन्तर्गत झापा जिल्ला कमिटीले सशस्त्र विद्रोह गर्ने निर्णय गरेको थियो । खासगरी माओको नेतृत्वमा भएको चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति र भारतमा चारु मजुमदारको नेतृत्वमा भएको नक्सलवादी संघर्षबाट प्रेरित भएर जोसिला कम्युनिष्ट युवाहरुले वर्गशत्रु सफाया भन्दै सामन्तीको टाउको गिँड्ने अभियान थालेका थिए । त्यसक्रममा धर्मप्रसाद ढकाललगायतको ‘सफाया’ गरिएको थियो ।
०२९ साल फागुन २१ गते झापा विद्रोहमा लागेका पाँच योद्धाहरुलाई सुखानीको जंगलमा लगेर पञ्चायती सरकारले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेपछि त्यो संघर्ष तुहियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि एमालेले झापा विद्रोहलाई ‘उग्रवामपन्थी भड्काव र क्रान्तिकारी दुस्साहसवाद’का रुपमा व्याख्या ग¥यो । झापा विद्रोहका एक नाइके एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्वयंले झापा विद्रोहमा कमजोरी भएको भन्दै आत्मालोचना गरेका थिए । सो आत्मालोचनासँगै एमालेले ‘जबरजस्त धक्का’, ‘गुणात्मक फड्को’ र ‘क्रमभंग’को साटो ‘शान्तिपूर्ण रुपान्तरण’ अनि ‘क्रमिक र स्वाभाविक विकास’को बाटो अंगाल्यो । एमालेको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको लाइनलाई विद्रोहरत माओवादीले भने त्यसबेला ‘संशोधनवादी र यथास्थितिवादी’ बताएको थियो ।
एमाले नेताहरुले माओवादी जनयुद्धलाई ‘उग्रवामपन्थी भड्काव र क्रान्तिकारी रोमान्सवाद’ भन्दै आएका थिए । आफ्नै जग झापा विद्रोहलाई समेत गलत बाटो बताउँदै आएका एमाले नेताहरु अब के एकीकरणपछि माओवादीको दश वर्ष लामो ‘जनयुद्ध’लाई जायज मान्लान् त ? गम्भीर प्रश्न छ ।
हजारौंको बलिदानसहित निकट अतीतमा भएको हिंसात्मक विद्रोहबारे एकीकृत पार्टी मौन रहन पक्कै मिल्दैन । जनयुद्धलाई आत्मसात गरेर जाँदा एमालेले हालसम्म लिँदै आएको लाइन गलत भएको पुष्टि हुने, आत्मसात नगर्दा माओवादी केन्द्रका नेता/कार्यकर्ताले नमान्ने अवस्था छ । एकीकरणमा जनयुद्धको विश्लेषणको प्रश्न पेचिलो बन्ने सम्भावना छ ।
वाईसीएलका नेता दिपशिखाले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा भनिसकेका छन्, ‘वृहत वाम धु्रवीकरणमा असहमत हुन सकिन्न, यसका लागि बहस गर्दै जाऊँ । जनयुद्ध, जनयुद्धमा बगेको रगतको मूल्य के हुन्छ ? सिद्धान्तका आधारभूत कुरा मिलेको छ कि छैन ? आधारतभूत सिद्धान्तका कुरा र जनयुद्ध स्वीकार गरिनुपर्छ, बहसको विषय बन्न सक्दैन । अरु सवालमा बहस गर्दैै जाउँला ।’
तेस्रो गाँठोः माओवाद
अहिले एमालेले मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई मात्र मान्दै आएको छ । उसले ‘माओवाद’ मान्दैन । माओवादी केन्द्रको वैचारीक आधार भनेकै ‘माओवाद’ हो । हुन त शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी केन्द्रले माओवादलाई छाड्दै आएको आरोप नलागेको होइन, तर राजनीतिक दस्तावेजमा माओवादकै सिर्जनात्मक प्रयोगका रुपमा प्रचण्डपथको व्याख्या गरिँदै आएको छ ।
संविधानसभा र हालैको स्थानीय निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा पुगेपछि माओवादी केन्द्रभित्र पार्टीले ‘क्रान्तिकारी धार’ फेरि समात्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । कांग्रेस र एमालेभन्दा भिन्न नभएसम्म माओवादी केन्द्रको अस्तित्व संकटमा परिरहने विश्लेषण हुँदै आएको थियो ।
प्रचण्डले एक्कासी एमालेसँग एकीकरणको पहल थालेपछि कार्यकर्ता रनभुल्लमा परेका छन् । आफ्नो पार्टी ‘सोसल डेमोक्रयाटिक’ लाइनमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता माओवादी केन्द्रका क्रान्तिकारी सोच राख्ने नेता/कार्यकर्तामा देखिन्छ ।
माओवादी यदि सोसल डेमोक्रेटिक धारमा गयो भने उसको अलग अस्तित्व रहने छैन । अन्ततः नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार एमाले नै भएको पुष्टि हुनेछ । त्यस्तोबेला ‘प्रचण्डपथ’को औचित्य पनि धुलिसात हुनेछ । के माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उनकै पार्टीले भन्दै आएको एमालेको ‘यथास्थितिवादी धार’मा जालान् त ? अनि के एमाले अध्यक्ष केपी ओली विगतमा उनले आरोप लगाएझैं ‘हत्यारा र लुटेराहरुको समूह’सँग मिलेर बस्न सक्लान् ? के एमालेले ‘प्रचण्डपथ’ र ‘माओवाद’ स्वीकार्ला ?
चौथो गाँठोः विचारधारा
एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति यी तीन दलहरुबीच आजको सन्दर्भमा मार्क्सवादको सर्वस्वीकृत व्याख्यासहितको नीति तथा कार्यक्रम पनि छैन । एकीकृत पार्टीले या त कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई पूरै परित्याग गरेर पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ या त कम्युनिष्ट जगमै टेकेर नयाँ विचार अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सर्वस्वीकृत नयाँ विचारका सन्दर्भमा यी दलहरुबीच खासै गृहकार्य भएको छैन । माओवादीभित्र विभिन्न विचार समूहहरु छन् । एमालेभित्र पनि छन् । बाबुरामको आफ्नै विचार छ । यी सबै विचारलाई एक ठाउँमा राख्दा सार संग्रहवादी सोचको जन्म हुने खतरा रहन्छ । अतः नयाँ र सर्वस्वीकार्य विचारका आधारमा पार्टी एकीकरण गर्न हाललाई कठिन छ । विचार र सिद्धान्त विनाको एकता भनेको राप्रपा एकीकरण भए सरह हो । त्यो कुनै पार्टी नभई रमझम गर्ने क्लब मात्र हुनेछ ।
यस हिसाबले पनि एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी गठनको हौवा हाललाई चुनावी तालमेलकै औचित्य पुष्टि गर्नका लागि मात्र चलाइएको हो भन्ने आधारहरु धेरै छन् ।
#ARTICLES #NEWS UPDATE #SPECIAL
कार दुर्घटना हुदा एक घाईते
सिन्धुली,२८ असोज – विपी राजमार्ग अन्तरगत सुनकोशी गाउपालिका वडा नं. ६ सितलपाटीमा आज बिहान कार दुर्घटना हुदा एक जना घाईते भएका छन । शन...
निजि आवास पून:निर्माण सम्बन्धि समुदायमा अधारित गोष्ठी
सिन्धुली,,३० असोज – निजी आवास पूनःनिर्माण सम्बन्धि समुदायमा आधारित गोष्ठि कमालामाई नगरपालिका वडा नं. ५ मा आईतवार सम्पन्न भएको छ । भुकम्पी...
दशैमा ४ लाख ६१ हजार राजस्व संकलन
नविनबाबु अधिकारी सिन्धुली,३ कात्तिक– जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले दशैको समयमा ४ लाख ६१ हजार ५ सय राजस्व संकलन गरेको छ । ट्रा...
मोहनविक्रम स्मृति फुटबल प्रतियोगिता
सिन्धुली,२८ असोज– भिमानमा जारी मोहनविक्रम स्मृति फुटबल प्रतियोगिता अन्र्तगत शुक्रवार विहान भएको अन्तिम क्वाटर फाइनल खेलमा चन्द्रमा युवा क्ल...
वर्मा सिन्धुलीबाट एक मात्र महिला उमेदवार
सिन्धुली,२१ – नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र नं. २(क)बाट महिला नेतृ विजुला वर्मा एक मात्र उमेदवार सि...
माओवादीले मन्त्री फिर्ता नबोलाउने, समर्थन यथावत
काठमाडौँ, २८ असोज (रासस) – नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र आफ्ना मन्त्रीलाई पनि फिर्ता नबोलाउने भएको छ ।...
स्थानीय तहले पशु क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा कृषक मारमा
सिन्धुली ,२८ असोज – स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दा पशु क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा किसान मारमा परेका छन् । पशु पञ्छि मन्त्रालयले विनियोजन गर...
तालिवानको कब्जामै तीन सन्तानको जन्म
इस्लामावाद,२८ असोज – अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी सञ्जाल तालिवानले अपहरण गरेका एक दम्पत्ती रिहा भएका छन् । क्यानाडेली पति र अमेरिकी पत्नीले त...
नेताका घरदैलोमा नेताकै भीड
काठमाडौं, २८ असोज – प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको टिकटका लागि नेताहरु नेताकै घरदैलोमा व्यस्त बन्न थालेका छन् । स्थानीय स्तरका नेताहरु ...
सिन्धुली अस्पतालमा जटिल रोगको सफल अप्रेसन
सिन्धुली,६ असोज – सिन्धुली अस्पतालमा जटिल प्रकृतिको अप्रेसन सफल भएको छ । हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नं. ७ क्यानेश्वरकी एक २७ वर्षीय महिलाको...
डबलक्याप वुलेरो दुर्घटना हुदा १५ जना घाईते
वाम गठबन्धनले काँग्रेसलाई अवसर हुनसक्छ
काँग्रेसले पनि बृहत लोकतान्त्रिक गठबन्धन गठन गर्ने...
प्रधानमन्त्रीकै जिल्लाबाट काँग्रेसका दुई गुटबाट ...
एक करोड ५४ लाख २७ हजार ७३१ मतदाता कायम
आज बिहान पनि परकम्प
एमाले र माओवादीबीच चुनाव चिह्नको ‘लफडा’
बस दुर्घटनामा तीनको मृत्यु, २० घाइते
'मुसा' प्रचण्डको उत्तर–दक्षिण दौड
चुनावको मुखमा गर्नलागिएको वाम गठबन्धन अस्वभाविक:का...
माओवादीको चार नेताको असन्तुष्टि,नेतृत्वमा विचलन आए...
एकताको साझा दस्तावेजमा आजै हस्ताक्षर हुने, देउवा ब...
नेपालमा दैनिक ७ करोडको यौनव्यवसाय
खोलाले बगाएर पाँच जना बेपत्ता
► 2015 (2170)
All Siraha Radio Live Nepali Unicode Nepali Typing Online Tv
Sindhuli saugat, News portal from Sindhuli
Email Us: sindhulisaugat@gmail.com
Copyright © sindhulisaugat All Right Reserved